पैसाबारे दम्पती र साथीहरूबीच हुने विवादका चार कारण Bizshala -
काठमाण्डौ । के तपाईले पैसाको विषयमा आफ्नो जीवनसाथीसँग विवाद गर्नु भएको छ? परिवारका अन्य सदस्य वा साथीहरूसँग नि?
हालै ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार सम्बन्धमा समस्या ल्याउने प्रमुख स्रोत मध्ये एक पैसा हो। र यसको असर दम्पतीमा मात्र सीमित हुँदैन। यो परिवारका सदस्य र साथीसँगीसँग हुने समस्याको समेत कारण हो। र यस्तो अवस्थाको समाधान भनेको कुराकानी र पैसाबारे इमानदारी र खुला छलफल हो।
तर यसको अर्थ तपाईँले सधैँ आफ्ना अभिभावकको सिको गर्नुहुन्छ भन्ने भने होइन। उदाहरणका लागी तपाईँका लागि बाल्यकालमा पैसा सधैँ अपुग हुन्थ्यो भने पछि गएर तपाईँ निकै खर्चालु व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र हामी पैसालाई यसको लेनदेनसँग सम्बन्धित सुविधाभन्दा माथि राखेर यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँछौँ।
पैसाबारे कुरा गर्न उचित समय छान्नुहोस : एक अर्कालाई सोधपुछ गर्न वा झगडा गर्न छोड्नुस। उचित समय निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
आफ्नो साथीलाई निराश नबनाउनुस् : आफ्ना लागि उभिए पनि साथीलाई आरोप वा दोष लगाउने काम नगर्नुस्।
आफ्नो बजेट बारे नियमित रूपमा कुरा गर्नुस् : तपाईँहरू दुवै समान धरातलमा हुनुपर्छ जसका लागि साप्ताहिक, मासिक वा पाक्षिकरूपमा छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। तपाईँहरूले तय गरेको कुरामै बस्नुपर्छ वा त्यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने बारे तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ।
खुलारूपमा कुरा गर्नुस् : यदि तपाईँलाई आफ्नो साथीले आफूलाई बुझोस् भन्ने लाग्छ भने उनीसँग खुला रूपमा कुरा गर्न जरुरी हुन्छ।
एक अर्कालाई सुन्नुस् : ध्यानपूर्वक कुरा सुन्नुस् र आफ्ना साथीले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुस्।
एक अर्काको सम्मान गर्नुस् : आफ्ना साथीसँग विश्वास, सहकार्य र सम्मानको वातावरण तयार पार्नुस् ताकि तपाईँहरू दुवै जनामा अर्कोले कस्तो धारणा बनाउला भन्ने डर नहोस्।
- उपहार योजनाबाट नलोभिनुस्। आफूलाई चाहिएको कुरा मात्र किन्नुस्। र आवश्यक परेको बेला मात्र किन्नुस्। एक सय रुपैयाँको सामान आधा दाममा किन्दै हुनुहुन्छ भने के कुरा सम्झनुस् भने तपाईँले ५० रुपैयाँ बचाउँदा त्यति नै रकम खर्च गरिरहनु भएको छ।
- प्रलोभनबाट बच्नुस्: कुनै पसल वा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने सूचना आउने इमेलबाट बाहिरिनुस्।
- खानपानको बजेटबारे ख्याल राख्नुस्: खपत गर्ने सामान मात्र खरिद गर्नुस्।
- सकेसम्म पैसाको प्रयोग गरेर सामान किन्नुस्: कार्डको प्रयोगबाट वा डिजिटल रूपमा भुक्तानी गर्दा पैसा खर्च भए जस्तो नलाग्न सक्छ।
- प्रयोग भइसकेका सामान किन्नुस्: यो तपाईँको लागि सस्तो पर्न सक्छ र वातावरणीय हिसाबले उचित।
- अनावश्यक कुरा बेच्नुस।
- ब्रान्डेड सामाग्रीको साटो साधारण सामान किन्नुस्। – बीबीसी नेपाली सेवा